Yan Aung: ငါအသက်ရှင်နေသရွေ့…
ငါ့မွေးနေ့မှာ ငါ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသွေးသားရင်းချာတွေကို ငါ့နားမှာ ရှိစေချင်လိုက်တာ
ငါ့ကိုမွေးပြီး နှစ်နှစ်အကြာမှာပဲ ငါသိပ်ချစ်တဲ့ ငါ့ဖေဖေကို မလိုသူတွေက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်.
ကြိတ်ငိုနေတဲ့ မေ့မေ့ရဲ့ ရှိုက်သံတွေက သမီးရဲ့ ညပေါင်းများစွာကို လွှမ်းမိုးနေခဲ့တယ်
မေမေက တည်ငြိမ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ငါ့ကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ချိုမြတဲ့လေသံလေးနဲ့ ပြောတယ်.
ဩော်. မေမေ့ကို သံအမတ်ကြီးခန့်လိုက်တယ်. မေမေအဲဒီ့မှာ သွားနေရမှာ. သမီးတို့လည်း လိုက်ခဲ့ရမှာလေ.
ငါ့သမီးလေးက သိပ်အမေးအမြန်းထူတာပဲ. သံအမတ်ကြီးဆိုတာ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ အကြားမှာ အဆင်ပြေအောင် စကားတွေ ပြောပေးတဲ့ လူကြီးပေါ့. ခုဆို မေမေက အဲဒီ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ ခုသမီးနေနေတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး အဆင်ပြေအောင် စကားတွေ သွားပြောပေးရမှာလေ.
သမီးလေးကြီးတော့ သိလာမှာပေါ့ကွယ်. ခုလောလောဆယ် သမီးချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်လိုက်ဦးနော်. မနက်ဖြန်ညကျရင် မေမေ့သားသမီးလေးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေ နှုတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ပေးမယ်နော်. သမီးလေးကြိုက်တဲ့ မုန့်တွေ ၀ယ်ထားပေးမယ်.
ငါ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းလေးတွေ ဝေဖြာလို့ ငါချစ်တဲ့ မေမေရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို ပြေးဝင်ခဲ့တယ်.
မေမေသွန်သင်ပေးခဲ့တဲ့၊ ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းတွေ၊ လူမှုကျင့်ဝတ်တွေကို စံနမူနာထားလို့
သမီးရဲ့ ဘ၀ခရီးတလျှောက်မှာ အောင်ပွဲတွေ အလီလီ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လေ…
I’m proud of you, honey! လို့
ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေ ထင်ကျန်နေဆဲပါပဲလေ…
Departure Gate ထဲမ၀င်မီ မေမေက ငါ့ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်နမ်းပြီး စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်.
သူ့အိမ်မှာပဲ ငါ့ရဲ့ အနာဂတ်ခင်ပွန်းလောင်း မိုက်ကယ့်ကို စတွေ့ပြီး ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်.
တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ…
ညနေရုံးဆင်းချိန်တွေနဲ့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာ ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Volunteer ၀င်လုပ်ခဲ့တယ်
ဆင်းရဲတဲ့ လူနာတွေကို စာဖတ်ရာမှာ ကူညီနိုင်ဖို့နဲ့ အဖော်အဖြစ် နေပေးဖို့ပေါ့
ငါချစ်တဲ့ ငါ့ခင်ပွန်းနဲ့အတူတူ ငါမြတ်နိုးတဲ့ အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို
ငါ့ကို ငါ့တိုင်းပြည်က လိုအပ်လာရင် အချိန်မရွေး သွားရောက်ကူညီခွင့်ပြုပါလို့..
ငါ့ကို သိပ်နားလည်မှုရှိတဲ့သူကို ငါ့ဘ၀ရဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာ
ငါ့နှလုံးအိမ်ထဲကို လောင်းချခဲ့တဲ့ မေမေ့ရဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ပဲလေ…
ငါဘယ်တော့မှ ဦးကျိုးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး…
ငါ့ဘ၀မှာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ခံစားမှုတစ်ရပ်ကို ငါခံစားလိုက်ရတယ်သိလား
ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ Visiting Scholar အနေနဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ ဂျပန်ပြည်မှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို
မေမေခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာကို ငါလဲယူလို့ရနိုင်မယ်ဆိုရင် ယူပစ်ချင်လိုက်တာ..
ဒါဆိုရင်တော့ ငါ့မိသားစုနဲ့အတူတူ အသိုက်အမြုံမပျက် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေလို့ရတယ်.
ငါချစ်တဲ့ ငါ့ပြည်သူတွေအတွက်၊ ငါချစ်တဲ့ ငါ့နိုင်ငံတော်အတွက်၊ ငါချစ်တဲ့ ငါ့ဖေဖေအတွက်
မေမေ့ကို သဂြိုဟ်တဲ့နေ့မှာပဲ မေမေ့ရုပ်ကလာပ်ရှေ့မှာ သမီးတိုင်တည်သစ္စာပြုခဲ့တယ်
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အကျုံးမ၀င်ပါဘူးလို့ ဗြောင်ငြင်းတယ်.
အဲဒီ့ကတည်းကပဲ ငါ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်၊ အကျယ်ချုပ်ပြန်ချလိုက်နဲ့ နိုင်ငံရေးကစားကွက်တွေ လှည့်ကစားခဲ့တယ်..
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုတွေနဲ့ ငါ့နာမည်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတာ
ငါ့ကိုနိုဘယ်လ်ဆုပေးတဲ့အကြောင်းကို ရှားရှားပါးပါးတောင်းဆိုထားရတဲ့ ရေဒီယိုအစုတ်လေးတစ်လုံးကတစ်ဆင့် ငါကြားသိခဲ့ရတယ်.
မေမေ့အတွက်ရတဲ့ ဆုကြေးငွေကို Prospect Burma ဆိုတဲ့ NGO အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး
သားတို့အပေါ် ဂရုမစိုက်မိခဲ့တာတွေကို နောင်ဘ၀ဆိုတာတွေမှာ ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရင်
အတိုးချပြီး ပြန်ပေးဆပ်ပါမယ် သားတို့ရယ်…
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကို ဘယ်ဘ၀မှာမှ ထပ်မံ မကြုံတွေ့နိုင်ကြပါစေနဲ့တော့လို့
ငါ့ကို ပြန်လွှတ်ရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စောင့်မျှော်နေသူတွေလည်း နွမ်းလျလှပါပြီ
ရေဒီယိုထဲက ဆုတောင်းသံတွေ တစ်သဲသဲနဲ့ ၀င်လာမစဲဖြစ်နေတယ်.
ငါ့ရဲ့ အေးမြတဲ့ အပြုံးအောက်မှာ ခက်ထန်တဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝလေး တိုးလျှိုးလို့ ငါ့ကို ဦးညွှတ်တယ်.
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အမှောင်ကိုဖျောက်လို့ အလင်းနေ့သစ်များကို ကြိုဆိုနိုင်ပါစေသား…
Happy Birthday ပါ မေမေစု….
ဒီိနေရာက အချက်အလက်လေးတွေကို အခြေခံပြီး ခံစားရေးဖွဲ့ထားပါတယ်...
မေမေစုရဲ့ သားများ ကိုရင်ဝတ်နဲ့ ဓာတ်ပုံကို တခုတ်တရ ပေးပို့ပေးတဲ့ အစ်မခင်မင်းဇော် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ)အား လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ခင်ဗျာ...
ဂွတ်ရှယ်.. ဘယ်လို ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး..
မသိသေးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထပ်သိရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ.. မောင်ရန်..
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထပြီး မျက်ရည်တွေ ဝေ့၀ဲလာတဲ့ အထိပါပဲ..
များများလေးရေးပေးပါ ဖတ်ရတာ နည်းသေးတယ် အရမ်းချစ်သွားပြီ (ဒီဆောင်းပါးကြောင့်)
ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ အများကြီးနဲ့.. ရေးထားတဲ့ ဒီစာလေးမှာ
မောင်ရန်ရဲ့ passion ကို မြင်နေရပါတယ်..
ကိုရန်အောင်ရေ ... ခင်ဗျားက ဒီလိုကျတော့လဲ အလာကြီးပါလားဗျ ...။ ကျွန်တော်လေးစားအားကျတဲ့ လူနဲစုလေးထဲကို ခင်ဗျားကိုပါထည့်လိုက်ပြီဗျို့ ...။
ကိုရန်အောင်... ခင်ဗျားကို လေးစားသွားပြီ။
Thanks so much for including them.
Indeed something worth reading~
worth feeling for~
keep the spirit ever flmaing!
မေမေစုရဲ့ ရွှေအဆင်းနဲ့ အရည်အချင်းတွေကို
အသက်နဲ့ ဘ၀ကိုပါ ပေးလှူထားတဲ့ အာဇာနည် မေမေစုအတွက်
ခံစားရေးဖွဲ့ ပေးတဲ့ Excellent post!
For your kind effort, သိုင်းကြူး၁ကုဋေပါ ရန်ရန်
itsareally nice post.
one night stand said...
ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ် ... ကြက်သီးမွှေးမျှင်းတွေ တဖျန်းဖျန်းထတယ် ... အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လို ရယူခဲတာလဲ .. အရမ်းတော်တယ် ဗျာ..
Htet Htet Khine said...
အန်တီ့သားတွေ ကိုရင်ဝတ်နဲ့ ပုံ အန်တီ့ဆီမှာရှိတယ်
ဒီပို့စ်ကို မျက်ဝန်းတွေ မှုန်ဝါးစွာနဲ့ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီမှာတော့ ဆင်သွားရင် လမ်းဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့မူနဲ့ အတင်းအကြပ် ဇွတ်လုပ်နေကြပါတယ်။
အခုအချိန်ဟာ ကျနော်တို့အတွက် အရမ်းအရေးကြီးနေပါပြီ။
ဒီတိုင်းပြည်သူတွေနဲ့ ဒီအစိုးရ ထိုက်တန် - မတန် အဆုံးအဖြတ်ပေးချိန် ရောက်တော့မယ်။
I really thank you for this nice post!
ကိုရန်အောင် ကျေးဇူး .......
ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့ပြီလို့ ဂုဏ်ပြုပါရစေ။
ကျနော်တို့ ရင်ထဲက အမေစုအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးလေးစားမှုတွေကို
ကိုရန်အောင်ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ကထွက်လာတဲ့ စာသားတွေနဲ့ ထပ်တူပြုပါရစေ။
ကိုရန်အောင်… ကလောင်ဟောင်းတွေထက် အဆထောင်သောင်းသာနေလို့ ဂုဏ်ယူစွာ ချီးကျူးပါရစေ။ ဆက်လက်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ထိထိမိမိ စာတွေရေးနိုင်ပါစေ။